Taariikhda My Butros » Waxa aad si fiican u ogaado: Chivalry waa King
Waxay ayaa ku booriyay by dhaqanka casriga ah in ay qof dumar ah oo xoog leh oo garanaya sida is ogow of nafteeda iyo kadib waxa uu doonayo. Waxay si xoog ahaantii, in aanay ahayn nooca gabar oo u baahan in ay albaabada u furay iyada. Waxay jees jeesaan lahaa ee ubaxa sida a overture jaceyl riixeya iyo qaato bixinta casho sida cay inuu madax banaani dhaqaale. Halkan nin oo qarsoodi ah: Haddii aad isticmaaleyso CEO shirkadda ka soo baxay oo ku saabsan taariikh koowaad ama shukaansi gabar oo derides hindiga weyne, chivalry aanu runtii u baahan tahay inaad u soo galeen play, oo mar kasta iyada sakaraad.
Ha ka Doodin, Just Qaado fursad
Ragga ku doodi karaa inay maalinta casri ah, Haweeney madax banaan internalize laga yaabaa in dhaqanka chivalrous sida ficilada ka dhanka ah haweenka. Maalmahan, haa, ragga iyo dumarku way eid quruxsan badan, laakiin chivalry ma aha in muqaddaska u doodaya dulmi haweenka ama geysanaya fal-u-falladii bulshada ee haweenka. Kaliya 7 boqolkiiba dumarka dareemayaa falal chivalrous, sida haysta albaabada u furan, waa patronizing, sida laga soo xigtay Daily Mail. Weli, sida uu sheegay nin ka mid ah oo ku saabsan Elite Daily, kale ah 93 boqolkiiba Haweenka aan la weydiisanaya falalkan chivalrous. Undertones Chivalrous waa haween wax ka badan ka filayaan inay ka, iyo rag badan in lagu dhex daraa.
Sidaas awgeed chivalry ma dhiman, waxa uu si qaldan u fahmeen. Louisa Peacock of Telegraph ayaa sheegay in rag ka fogaadaan chivalry cabsi in falalka chivalrous la misconstrued doonaa ama idinku soo diro farriin khaldan. Ayado this digital, jawaabaynin fariin qoraal ah ama ka jeelahay sawir Instagram ah u hadli karo Muga, weli noqon sida adag u heellanaa sida hieroglyphics. Waxaan noqon karaa dhaqan bulsho jahwareer in ka badan lafa iyo male labaad, gaar ahaan marka ay timaado shukaansi iyo hindiga. Xataa marka qarankeena ku doortaan madaxweynihii ugu horreeyey ee dumar ah, xataa haddii nin keeno maleeyo Ubax eegi doonaa sida sed galmada, Haweenka mahad nin oo ay chivalrous. Chivalry aan siyadinayso qof dumar ah oo jilicsan sababta oo ah way amiirada jilicsan oo u baahan in la badbaadiyey by Prince sixraya. Waa ixtiraam ah, tilmaam nooc ah iyo weer jacayl iyo ixtiraam. Haweenka ayaa weli dooneysa inay la qaadi on taariikhaha. Xidhiidhada ayaa weli dooneysa inay la soo bandhigi faleynin. Dumar ayaa filaya inay la pampered.
Chivalry ka dhigaysa nin nin iyo qof dumar ah dareemayaa gabadh. Ula dhaqan gabadha in aad nolosha la falalkan of chivalry iyo baaqyada ka taataabtay, haddii aad ku socoto taariikhda labaad is qabaan ama ay u 10 sano.
La yaab leh ubaxyo on iyada dhalashadiisa, on Maalinta Jacaylka ama sababtoo ah. Diritaanka ubax, sida qurux FTD kacay bouquets, waxaa laga yaabaa hadal haynta romantically, laakiin dumarka jecel doonaa farta dhexe ilaa dhammaadka wakhtiga.
U sheeg ka aad tahay walba. U sheeg iyada fool-ka-fool ah. Waxaa qoraalka. Ku qor on a Post-u. Kaliya u hubso iyadu marnaba illoobaa.
Socda kuugu dhow wadada, iyo qabsado uu iyada gacanta halka gudbaya gaadiidka. Dareen sida haddii aad u badbaadiyaan ammaanka waa endearing.
Iyada qaad qado fiican. Xataa ka dib sannado badan oo cunaya pizza sariirtay wada, qado fiican rekindles dhimbiil in. Haa, socon ka hor in la furo albaabka gaariga iyada.
Iyada gacanta si lama filaan ah Midhadh. Qabsado uu iyada gacanta inta aad daawato TV ama halka line u kafeega. Waayo, qalbiga flutter doonaa.
Iyada salaama albaabka ka hor taariikhda a, oo dabadeedna iyada socon albaabka. Taasi waa sida ay u qabtay filimada ee.
Wac si aad u hubiso in-, halkii text. Waxay gabadhii ku keentay in aad noloshaada oo muhiim ah oo ku filan in la sameeyo wicitaan oo taleefan ah.
Iyada bogaadin. Sababta oo ah way qurux badan.
Helitaanka A fidiyoo Butros
Afar nooc oo Ragga Dumarka Tag, waayo,